Asluubta Faallada ee Sabahionline - Sabahionline.com
Asluubta Faallada ee Sabahionline
1. Faallooyinka Sabahionline.com waxaa loogu talaggalay aqristayaasha ka yimid Geeska Afrika iyo waddamada uu boggani la hadlo, oo xiriirrada la leh waddamadaas, ka hawlgala waddamadaas, iyo Qurbojoogtooda. Faallooyinka laga sameeyo maqaallada iyo bandhigyada wararka Sabahionline.com waxaa looga golleeyahay in la qalqaaliyo helitaanka iyo isweydaarsiga fikradaha, iyo in wadahadal ilbaxnimo iyo furfurnaan leh oo ay arki karayaan aqristayaasha oo dhan laga furo mawduucyada markaa laga wada hadlayo.
2. Kani waa gole la daaddihinayo wadahadalkiisa. Sabahionline.com ayaa eegaysa faallooyinka xaqna u leh in ay tirtirto, tifaftirto, ama bedesho qormadii ay u aragto mid aan habboonayn.
3. Dhamaan xiriirrada lala sameeyo Sabahionline.com waxaa loo arkaa mid loogu talaggalay in la daaboco, haddii aan si kale loogu muujin farriinta billowga ah ee uu qoraagu soo dirayo.
4. Sabahionline.com waxay xaq u leedahay in ay tifaftirto dhammaan faallooyinka iyadoo wixii xun ka saaraysa, cadaynaysa, ama meesha la ekaysiinaysa. Faallooyinka laga sameeyo maqaallada iyo bandhigyada wararka ee Sabahionline.com waa in ay noqdaan wax sal leh qaab ahaan. Faallooyinka mawduuca ka baxsan lama daabici doono. Faallooyinka gaaggaaban oo ku sabsan in aqristuhu uu ka helo ama aanu ka helin maqaalka ama bandhigga wararka waa ama la daabici karaa ama layska deyn karayaa, hadba sidii ay doorbiddo Sabahionline.com.
5. Bedka faallada waxaa loo jaangooyey in looga hadlo faallooyinka la xiriira mawduuca maqaalka ama bandhigga. Dib uma daabici kartid qoraal dheer oo qormo aad horay u qortay ah ama wax dad kale ay qoreen ah, oo ay ku jiraan maqaallada wararka. Waxaad codsan kartaa in aannu dhejinno xidid (link) dadka u jiheeya qormooyinkaas oo faallada ku dhex jira..
6. Faallooyinka aflegaaddada, cayda, afxumo ay ku jirto, ama waxyaabo cunsurinnimo ah, iwm. lama daabici doono. Maagid qof kale, weerar afka ah oo shakhsi, faallooyin cunsurinnimo, iyo istcmaalidda afxumo faalloode kasta oo soo dira lama daabici doono.
7. Qorayaasha aan doonayn in ay sheegaan magacooda waa in ay isku sheegaan hal naanays, si ay aqristayaashu u ogaadaan in faallooyinkaasi ay ka imanayaan hal shakhsi. Haddaysan sidaa yeelin aqoonsadeyaal lambarro ah ayaa loo samayn karaa.
8. Soo gudbinta faallooyin la doonayo in lagu soo daabaco Sabahionline.com waxay ka dhigan tahay garawsiga iyo oggolaanshada asluubtan faallooyinka. Asluubtan dhamaanteed ama qaarkeed ayaa dib loo qori karaa iyadoon wax ogeysiin ah la bixin.
9. Wax ku qoran Sabahionline oo loo qaadan karo talo sharci ma jiraan. Sabahionline.com ma bixiso talo sharci.
10. Dhamaan faallooyinku waa in ay u hoggaansan yihiin sharciyada la dabbakhi karo ee gobolka uu deggan yahay faallooduhu. Sabahionline.com waajib kuma aha in ay isha ku hayso, tifaftirto, faafreebto, ama qaaddo masuuliyadda wax haba yaraatee ka mid ah faallooyinka. Ku xadgudubka asluubteeda faallooyinka ama wax bay ka qaban kartaa ama way iska deyn karaysaa. Aqristayaasha faallooyinka reebaya iyaga kaligood ayaa masuul ka ah waxa ku jira faallooyinkooda waana in ay xaqiijiyaan in faallooyinkoodu ay waafaqsan yihiin sharciga oo aysan dhinacna uga baxayn shuruudaha degsan.
11. Faallooyinka ay ku jiraan xididyo (links) mareegyo kale oo aan raacin mabaadii’da asluubta faallooyinka ee ku xusan jumladaha 6 iyo 10 ee asluubtan lama soo dhejin doono.
12. Si loo sahlo fikrado isweydaarsiga la doonayo oo loo furo wadahadal ilbaxnimo leh oo furfuran oo ku saabsan mawduucyada laga hadlayo oo ay wada arki karaan aqristayaasha dhammaan, loogana fogaado jawaabo shaqsiyeed ay faalloodaha u diraan dadka aan u bogin ra’yiga uu soo qoray, faallooyinka ay ku jiraan cinwaanka e-maillada iyo lambarrada tilifoonka ee faalloodaha waxaa laga tirtiri doonaa xogtaas xiriirka inta aan faallada qofkaa la daaabicin.
13. Golayaasha faallooyinka ee Sabahionline.com kuma buunbuunin karaysid haybo ganacsi hawlo ganacsi la xiriirana kuma aad samayn karaysid.